RASMI: Bruno Fernandes oo ku guuleystay abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa bisha December ee Premier League – Gool FM
(Manchester) 15 Jan 2021. Waxaa shaaca laga qaaday xiddiga ku guuleystay abaal-marinta kan ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii lasoo dhaafay ee December.
Ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa shaaca laga qaaday in loo caleemo saaray abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii lasoo dhaafay ee December.
Sida lagu xusay bogga rasmiga ah Twitter-ka ee horyaalka Premier League xiddiga qadka dhexe kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii la soo dhaafay ee December.
Bruno Fernandes ayaa ku soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare ah kooxda Manchester United, taasoo ka dhigtay in loo caleemo saaro abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii lasoo dhaafay ee December.
Fernandes ayaa dhaliyay Seddex gool lix kulan oo uu saftay Premier League bishii Diseembar iyadoo kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay noqotay mid aan dhinaceeda dhulka la dhigin, waxay badiyeen afar kulan halka labada kale ay barbaro galeen.
26 jirkaan ayaa dhaliyay labo gool kulankii ay Man United 6-2 ku dubatay Leeds, sidoo kale wuxuu shabaqa soo taabtay ciyaartii Boxing Day-ga oo ay barbaraha 2-2 la galeen kooxda Leicester City.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal ayaa dhaliyay 15 gool, 26 kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan, isagoo ka caawiyay Manchester United inay seddex dhibcood kaga sareyso Liverpool hogaanka horyaalka Premier League.
Bruno Fernandes ayaa wuxuu abaal-marintan ku garaacay xiddigaha kala ah Mohamed Salah, Anwar El Ghazi, Marcus Rashford, John Stones, Emiliano Martínez, Ben Mee iyo Tomáš Souček.
Sida laga soo xigtay shabakadda tirakoobka ee “Squawka”, Fernandes ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee ku guuleysta abaal-marinta ciyaaryahanka bisha ee Premier League, 4 jeer hal sano gudaheed.
Waxaa xusid mudan in Bruno Fernandes uu ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan bilihii kala ahaa February, June, November iyo December ee sanadkii tagay 2020.